“Maaha In Aad Fursaddiina Rag Siisaan…………..” Wasiirka Wasaarada Biyaha Somaliland | Gaaroodi News
“Maaha In Aad Fursaddiina Rag Siisaan…………..” Wasiirka Wasaarada Biyaha Somaliland
Hargeisa(Gaaroodi-News) 1993 ilaa maanta oo aan Somaliland joogo oo aan ku imi da’yari oo aan ahaa waliba ergadii Boorame raggii ugu yara da’ahaan hadana waligay intaan Somaliland joogay anigoo mansab walaba/jago kasta ka soo qabtay aan ahyn Madexweynenimo!
Waligay reernimo iyo isirnimo toona la iiguma diidin Jago/Xil aan anigu damcay.
Jaagooyinka faraha badan ee aan soo qabtay cid reer Laas-caanooda oo waligay igu tageertay ma jirin, Rag baan se “ilkahooda gowska ugu danbeeya kala soo baxay”
Inanka reer Sool’oow Somaliland xaq iyo xuquuq iyo deegaan baad ku leedahay waxaan waxa idinala wadaagya inaad ogtaan inaad dalkan leedahiin oo dadkan waxwada la-haansho idinka dhexeeyo ee maaha inaad Gobolada dhexe uga hadhaan, ma jiro nin deegaankeena oo sidan idiin tilmaamayo waxa idiinku sheegaya.
Anigu waxaan aaminsanahy in ninku uu ragganimadiisa kaga karti roonyahy reernimadiisa, ee kaalintiina deegaanimo buuxiya oo la qaybsada oo la tartma oo ku suntanaada.
Waan soo dhaweynyaa nin kastoo dhalinyaro iyo talo iyo tusaaleba iiga baahda oo raggnimadiisa isku wada.
Sulayman Yuusuf Cali “koore”
Wasiirka Biyaha ee Somaliland